Thenga i-Testosterone Inanthate powder in Bulk | AASraw
/Blog/Testosterone Enanthate/Thenga i-Testosterone Inanthate powder in Bulk
ezaposwa ngomhla 01 / 27 / 2018 by 阿斯劳 bha liweyo Testosterone Enanthate.
Yintoni i-Testosterone Enanthate?
Testosterone Enanthate enye ye testosterones esetyenziswa kakhulu xa unyango lwe-testosterone ephantsi. Kuye kwaziwa kakhulu kwimijikelezo yokuphucula ukusebenza. Le ngenye yezonabolic steroids ezinokuthengwa kakhulu kwiimarike, ixhomekeka kakhulu, ixhomekeke kakuhle ngabantu abaninzi abadala kunye nokunikezelwa kwayo kuphahleni.
I-Testosterone Enanthate yi-anabolic steroid epheleleyo kumanqanaba onke asetyenziswayo. Le yile i-steroid epheleleyo ye-anabolic okokuqala ngxaki yomsebenzisi we-steroid kwaye iya kusebenza ngokulinganayo kumntu kunye nexesha elininzi kwi-saddle. Kuya kuthwala imiphumo emihle kodwa siya kufumanisa ukuba kulula ukulawula. Ukuba oku kumangalisa akufanelekile. Emva kwakho konke, nangona ukwenziwa kobugqwetha nje yi testosterone, ihommoni umzimba womntu awuqhelekanga kuphela kodwa kubaluleke kakhulu kwimpilo yethu kunye nokuphila.
Yintoni i I-Testosterone Inanthate powder?
Igama: Testosterone Inanthate
Ifomula yeMolekyuli: C21H28O3
Ubunzima beMolekyuli: 400.59
Indawo yokunyibilika: 34-39 ℃
Ixesha lokugcina: 2-8 ℃
Umbala: Mhlophe umgubo crystalline
I-Testosterone Inanthate Cycles and Uses
I-Testosterone Inanthate imijikelezo iqhelekileyo yinto yokubhukuda okanye ukufumana ubunzima bemvelo, nangona ingasetyenziselwa ngendlela ekhethekileyo yokusika okanye ukulahlekelwa kwezinto ezilahlekileyo. Ukufumana ubuninzi okanye ukubetha, i-Testosterone Inanthate idla ngokuqeshwe kwisilinganiso esiphezulu (ngokuqhelekileyo ubuncinane be-500mg ngeveki), kwaye ngenxa yokuba i-steroid ye-anabolic ene-ester ende ifakwe kuyo, iya kubonisa ubungakanani bemizuzu engama- I-7 - i-10 iintsuku, kwaye ngoko i-Testosterone Enanthate imijikelezo iqhutyelwa kwixesha leeyure ze-10 - 12 okanye ngaphezulu.
Kwizinto zombini zokuqhawula kunye nokusika, i-Testosterone Enanthate ixhaphake kunye nezinye iimveliso zendalo eziza kubakhokelela ekujoliswe kuyo komsebenzisi (ukukhwaza, ukufumana ubuninzi, okanye ukulahleka kwexabiso). Ngokomzekelo, i-Testosterone Inanthate imijikelezo ngenjongo yokubhikisha ibandakanya ukusetyenziswa kweDeca-Durabolin (i-Nandrolone Decanoate) kunye / okanye i-Dianabol (iMethandrostenolone), apho i-Dianabol idla ngokuqhutywa kwiiveki ze-6 zokuqala njengeklasi yokuqala yokukhaba.
Kwimeko apho i-Testosterone Enanthate imijikelezo iyakunqumla okanye ilahleko ezilahlekileyo, i-Testosterone Enanthate ivame ukuqhutyelwa kwi-TRT ephantsi kakhulu (Testosterone Replacement Therapy) umlinganiselo we-100mg ngeveki ngelixa ezinye iimveliso ezikhethiweyo ukuchithwa kunye nokulahlekelwa kwexabiso zigxininiswa ngexesha lojikelezo . Ukusetyenziswa kweTestonsterone Enanthate kule mlingo kukugcina nje umsebenzi oqhelekileyo womzimba kunokuba ugxininise ukuzuza nokuphucula ukusebenza.
Umyinge we I-Testosterone eluhlaza:
Ukunyanga i-testosterone ephantsi, i-Testosterone Inanthate i-doses iya kuwela kwi-100-200mg yonke imihla ye-7-10 ngokuqhelekileyo. Nangona kunjalo, abanye oogqirha baya kukwahlula i-dosing kunye nokuyilawula nganye imihla ezintlanu. Engaqhelekanga e-US abanye oogqirha baya kunika i-200-400mg nganye iiveki ze-2-3 kunye nakwezinye iiveki ze-4. Oku akunakulungeleka kodwa kulandelwa ezinye izinto. Ubungakanani bexesha lonyango luya kuba lugqibeleleyo. Amadoda amaninzi adinga unyango ophantsi we-testosterone aya kuwudinga ubomi. Oku kunokuzwakala kukucaphukisa kodwa uzibuze umbuzo obalulekileyo; ngaba unokuthi uhlupheke kwi-testosterone ephantsi okanye uyiphathe?
Kwimeko yokuphucula ukusebenza, iimeko eziqhelekileyo ze-Testosterone Amanqanaba aza kuwela kwi-200-500mg ngeveki nganye. I-200-250mg ngeveki iyaqheleka ukuba i-hormone isetyenziselwa ukulwa nokunyanzelwa kwe-testosterone yemvelo ebangelwa ukusebenzisa ezinye i-anabolic steroids. Ngokwempembelelo ye-anabolic yangempela, abaninzi abantu baya kufumana i-400-500mg nganye ngeveki ukuze kube lula kakhulu kwaye kulula ukulawula. Ezi ziko ziza kuhlulwa zibe ziizixa ezimbini ezilinganayo ngeveki kwi-dosing nganye yeveki. Amanani angaphuma ngaphezulu kwe-500mg ngeveki; Nangona kunjalo, amadoda amaninzi aya kufumana uluhlu lwe-500mg ukuba lube yinto efunekayo. Ukuba kuninzi okufunekayo, amadoda amaninzi aya kufumana i-600-1,000mg ngeveki inokunyamezela kwaye ilawulwe kodwa amayeza athetha kwi-1,000mg mark iya kunandisa kakhulu amathuba okuba nemiphumo emibi. Uninzi lwe-testosterone umntu onokunyamezela kwaye ulawulo luyahlukahluka kumntu omnye ukuya kwesinye. Nangona kunjalo, amadoda amaninzi aya kufumana ama-doses angaphezu kwe-1,000mg ngeveki zonke kodwa iziphumo ezibekwe ziziphumo ezithile kwizinga elinye.
Kungakhathaliseki injongo yakho yokusetyenziswa, i-Testosterone Enanthate igcina kakuhle yonke i-anabolic steroids. Kukho, ke, akukho sizathu sokuyibeka kunye nenye i-testosterone. Oku kuya kubakho nto kwiimeko ezininzi. Khetha nje ezinye i-steroids ezidibanisa injongo ekufunyenweyo yokusetyenziswa kakhulu.
I-Testosterone Enanthate yinto elula kakhulu ye-anabolic steroid, kodwa nayo enye yezona-steroid enkulu kakhulu ze-anabolic zaso sonke ixesha. Inamandla kakhulu kwaye inomgangatho ophezulu kakhulu wokunyamezela phakathi kwamadoda amakhulu amakhulu. Njenge-arhente yokwelapha, ukusetyenziswa kweTestonsterone Enanthate kunokuguqula ubomi bakho. Kungaphezulu kunokwenzeka ukuba indoda eneminyaka ephakathi ikwazi ukuvakalelwa ngathi ineminyaka engamashumi amabini kwakhona. Akuyikuphela kuphela ukuthanda kwakhe kunye nenzondelelo ebomini ukubuya, uya kuba nempilo ngokubanzi.
Ngomthamo wokusebenza, ngelixa abaninzi baya kubeka ezinye i-anabolic steroids kunye ne-Testosterone Enanthate yabo ingasetyenziswa yedwa. Esi sisiseko sesiseko se-anabolic steroid esinokukhuthaza ukutshintsha okukhulu kwizinto zonke zomzimba ngokwakho. Nangona kuya kuthatha i-dosesistradio doses ukufumana inguqu yenkqubela kunye nokuphawulekayo, umbulelo umda weempembelelo ezimbi zihlala ziphezulu kakhulu. Kubaluleke kakhulu, ngelixa ixabiso eliphezulu le xabiso le steroid lingaphezu kwexabiso elinokubanika isibheno ngakumbi kunokuba sele likhona. Kungakhathaliseki ukuba liliphi lamava awukwazi ukungahambi kakuhle ngeTesttosterone Enanthate.
Kuyiwaphi uthenge i-Testosterone Enanthate powder online?
Unokufumana i-Trenbolone i-Acetate source source online, kodwa kunzima ukuthenga i-Trenbolone Acetate powder online. Kukho imithombo emininzi ethengisa iimveliso eziyintengiso kwimarike. ngoko xa uthengela i-Trenbolone i-Acetate powder online, kufuneka ukhethe umthombo onokubuyiselwa.
Izinto eziluncedo uthenge i-Testosterone Enanthate powder kwiAASraw:
1. I-quality steroids esemgangathweni ikhutshwe ngexabiso elisezantsi lemveliso
Siqinisekisa ukusulungeka okuphezulu kwazo zonke iipowder> iipesenti ezingama-98, kwaye kuba singumvelisi hayi umthengisi, zonke iimpahla apha zithengiswa ngokuthe ngqo ngexabiso eliphantsi.
2. Ukuhanjiswa okukhawulezileyo nokukhuselekileyo kwezinto eziphathekayo ze-steroid
I-1) Ipapa inokuthunyelwa ngaphandle kweeyure ze-24 emva kokuhlawula, kwaye unikezele ngenombolo yokulandelela.
2) Umthumeli onamava okhuselekileyo uqinisekisa ukuthunyelwa okukhuselekileyo nokuqondayo kwazo zonke izinto zokurhweba ze-steroid. Iinkqubo ezahlukeneyo zokuthutha, kunye nokukhetha okulungileyo kunakho kwidilesi yakho.
I-3) Izinga eliphezulu eliphezulu lokunikezelwa ngokukhuselekileyo lingaphezulu kwe-95%.
I-4) Ixesha lokuhambisa le-steroids ipowder: ii-3-5 iintsuku zokusebenza kwi-USA kunye neentsuku zokusebenza zokusebenza ze-4-6 kumazwe ase-EU.
3. Sinabathengi kuwo wonke umhlaba
I-1) Iinkonzo zobugcisa kunye namava anotyebi enza ukuba abathengi bazive bekhululekile, isitokwane esaneleyo sazo zonke iindidi zezixhobo ze-steroid kunye nokuhanjiswa okukhawuleza kudibana nomnqweno wabo.
2) Ingxelo yomsebenzisi iya kuthakazelelwa, iingcebiso zakho ziya kusilungiselela ukuphucula inkonzo yethu, kwaye luxanduva lwethu ukuhlangabezana nazo zonke iimfuno zabathengi.
I-3) I-AASraw ngomnye umthengisi onokuthenjwa wezinto zokwenza izinto ze-steroid ezineempahla ezisemgangathweni, ukuhanjiswa okukhuselekileyo kunye nokukhawulezisa ngenkonzo elungileyo.
tags: i-testosterone enanthate powder
Isikhokelo esicwangcisiweyo kwiTestosterone propionate powder evela	Thenga i-Methenolone Inanthate powder: musa ukuyithenga ngaphambi kokuba wazi ezi !!!